स्याङ्जा समाज युकेद्वारा गोर्खा समुदायका वरिष्ठ नागरिकहरुलाई सहयोग | We Nepali
२०७७ असार २८ गते २२:३८
लण्डन । स्याङ्जा समाज युकेले क्यान ईन्टरनेशनलको सहयोगमा अल्डरसर्टमा गोर्खा नेपाली समुदायका वरिष्ठ सदस्यहरूलाई कोभिड -१९ को लागि आवश्यक प्याक (मास्क र स्यानीटाइजर) वितरण गरेको छ। गोर्खा समुदायका १०० जना भन्दा बढी वरिष्ठ सदस्यहरुलाई आइतबार मास्क र स्यानीटाइजर वितरण गरिएको हो ।
कार्यक्रममा स्याङ्जा समाज युकेका अध्यक्ष सारदा गुरुङले अग्रजहरु बृद्धबृद्धा सदस्यहरुलाई सहयोगद्वारा सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । “सस्थाको राम्रो कार्यका लागि हाम्रो टोली, समुदायका सदस्यहरू र क्यान ईन्टरनेशनलका डा. बलराम ढकाललाई धन्यवाद दिन्छु,” उनले भने ।
क्यान ईन्टरनेशनल तथा स्याङ्जा समाज युकेका महासचिब डा. बलराम ढकालले यहाँ रहेका गोरखा नेपाली समुदायका सदस्यहरूलाई सहयोग गर्न पाउँदा खुशी लागेको बताए । “यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन लागि पर्नु हुने सबैलाई हामी धन्यवाद दिन्छौं। हामी आशा गर्दछौं कि हामी पनि आउँदो दिनमा पनि यस्तै समर्थन राख्न सक्छौं,” उनले भने ।
कार्यक्रममा समाज युकेका अध्यक्ष गुरुङ, उपाध्यक्ष भरत गुरुङ, संरक्षकहरु थर्क सेन, मेजर कुमार गुरुङ, कोषाध्यक्ष विष्णु थापा, वरिष्ठ सल्लाहकार डेभिड गुरुङलगाएत अन्य समुदायको उपस्थिती थियो । स्याङ्जा समाज युके हालै स्थापना गरेको स्याङ्जालीहरुको सामाजिक संस्था हो। क्यान ईन्टरनेशनल बेलायतमा दर्ता भएको परोपकारि संस्था हो र गोर्खा तथा नेपाली समुदायहरुलाई सहयोग गर्दछ।